အားလုံးက အခြိနျအကွာကွီး မှားချေါနကွေတဲ့ သူ့ရဲ့နာမညျ အရငျးကို ဖှငျ့ပွောလိုကျတဲ့ စိုငျးစိုငျး – Online News Post
အားလုံးက အခြိနျအကွာကွီး မှားချေါနကွေတဲ့ သူ့ရဲ့နာမညျ အရငျးကို ဖှငျ့ပွောလိုကျတဲ့ စိုငျးစိုငျး
အနုပညာ လောကမှာ လြှောကျလှမျး ကွတဲ့ သူတိုငျး ဝဖေနျ မှု တိုကျခိုကျမှု တှကေို အခြိနျနဲ့ အမြှ ခံစား ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ တခြို့ ကလဲ ဒေါသ အ လြောကျ တုံ့ပွနျကွ သလို တခြို့ ကလဲ မမွငျခငျြ ယောငျဆောငျ မကျြကှယျပွု တတျကွပါတယျ ။ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ တဈယောကျကတော့ ဒေါသ အလြောကျ တုံ့ပွနျတာမြိုး လဲ မဟုတျ မကျြကှယျ ပွုတာမြိုး လဲ မဟုတျပဲ ပညာသား ပါပါ ခဈြစဖှယျ တုံ့ပွနျ တတျ တာမြိုးပါ။
သူ့ရဲ့ အလုပျအ ကိုငျ အပျေါ စိတျနှဈ တတျမှု လူ့ကငျြ့ဝတျ ပွညျ့ဝမှု ဆကျဆံရေးတှေ မှာ ပညာရှငျဆနျဆနျ ပွုမှုတတျခွငျးတို့အပွငျ သူ့ကို မုနျးနေ တိုကျခိုကျနတေတျတဲ့ သူတှေ ကို တောငျမှ သူပရိသတျဖွဈလာတောငျ အခြိနျတိုနဲ့ စှဲဆောငျနိုငျမှုတို့က စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ ရဲ့ အစှမျးတှထေဲ အစှမျး တဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာလညျး ” နာမညျ ရငျး စိုငျးစိုငျးခမျးလိုငျ ပါ ( ဟထိုး မပါပါဘူး အခှေ ထုတျ တော့ လြှာရှညျပွီး ဟထိုး ထညျ့လိုကျမိပါတယျ ) အခုက စပွီး ဟထိုးမပါတဲ့ စိုငျးစိုငျးခမျးလိုငျလို့ပဲ အမှနျ အတိုငျး စာလုံးပေါငျးပါ တော့မယျ နာမညျပွောငျက မလိုငျ ပါ ( ခမျးမလိုငျ ခမျးမလိုငျဆိုပွီး မလိုငျဖွဈသှားတာပါ ) ”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့Real_Name_Challenge မှာ ပါဝငျခဲ့ တာပဲ ဖွဈ ပါ တယျ ။
ပရိသတျတှေ လညျး စိုငျးစိုငျးရဲ့ နာမညျ အရငျးနဲ့ နာမညျပွောငျလေး ကို သိရလို့ ကနြေပျနေ ကွမယျ ထငျပါတယျ နျော ။ ဖတျရှုပေးကွ တဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာ ပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျ နိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော ။ ” အခြိနျ အတျောကွာ မှားယှငျး နတေဲ့ သူ့ရဲ့ နာမညျ အရငျး ကို ပွောပွ လိုကျ တဲ့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ ” ပရိသတျကွီး ရအေနုပညာ လောကမှာ လြှောကျလှမျး ကွတဲ့ သူတိုငျး ဝဖေနျ မှု တိုကျခိုကျမှု တှကေို အခြိနျနဲ့ အမြှ ခံစားရ တာပဲဖွဈပါ တယျ ။
တခြို့ ကလဲ ဒေါသအ လြောကျ တုံ့ပွနျ ကွသလို တခြို့ ကလဲ မမွငျခငျြ ယောငျဆောငျ မကျြကှယျပွု တတျကွပါတယျ ။ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ တဈယောကျ ကတော့ ဒေါသ အလြောကျ တုံ့ပွနျတာ မြိုးလဲ မဟုတျ မကျြကှယျ ပွုတာမြိုး လဲ မဟုတျပဲ ပညာသား ပါပါ ခဈြစဖှယျတုံ့ပွနျတတျ တာမြိုးပါ ။ သူ့ရဲ့ အလုပျ အကိုငျ အပျေါ စိတျနှဈတတျ မှု လူ့ကငျြ့ ဝတျပွညျ့ ဝမှု ဆကျဆံရေး တှမှော ပညာရှငျ ဆနျဆနျ ပွုမှု တတျခွငျးတို့ အပွငျ သူ့ကို မုနျးနေ တိုကျခိုကျ နတေတျတဲ့ သူတှကေို တောငျမှ သူပရိသတျ ဖွဈလာတောငျ အခြိနျတို နဲ့ စှဲဆောငျနိုငျ မှုတို့က စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ ရဲ့ အစှမျးတှေ ထဲ အစှမျး တဈခု ပဲဖွဈပါ တယျ ။
ဒီနမှေ့ာ လညျး ” နာမညျရငျး စိုငျးစိုငျးခမျးလိုငျ ပါ ( ဟထိုး မပါ ပါဘူး အခှေ ထုတျတော့ လြှာရှညျ ပွီး ဟထိုး ထညျ့ လိုကျ မိပါတယျ ) အခု က စပွီး ဟထိုး မပါတဲ့ စိုငျးစိုငျးခမျးလိုငျ လို့ပဲ အမှနျ အတိုငျး စာလုံးပေါငျးပါ တော့မယျ နာမညျ ပွောငျက မလိုငျ ပါ ( ခမျးမလိုငျ ခမျးမလိုငျ ဆိုပွီး မလိုငျ ဖွဈသှားတာပါ ) ” ဆို တဲ့ စာလေးနဲ့ Real_Name_Challenge မှာ ပါဝငျခဲ့ တာပဲ ဖွဈ ပါ တယျ ။ ပရိသတျတှေ လညျး စိုငျးစိုငျး ရဲ့ နာမညျ အရငျး နဲ့ နာမညျပွောငျ လေးကို သိရ လို့ ကနြေပျ နကွေ မယျထငျ ပါတယျ နျော … . ဖတျရှုပေး ကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာ ပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနေ့ ကို ပိုငျဆိုငျ နိုငျကွပါ စလေို့ ဆုတောငျး ပေး လိုကျ ပါတယျနျော … .
အနုပညာ လောကမှာ လျှောက်လှမ်း ကြတဲ့ သူတိုင်း ဝေဖန် မှု တိုက်ခိုက်မှု တွေကို အချိန်နဲ့ အမျှ ခံစား ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တချို့ ကလဲ ဒေါသ အ လျောက် တုံ့ပြန်ကြ သလို တချို့ ကလဲ မမြင်ချင် ယောင်ဆောင် မျက်ကွယ်ပြု တတ်ကြပါတယ် ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် တစ်ယောက်ကတော့ ဒေါသ အလျောက် တုံ့ပြန်တာမျိုး လဲ မဟုတ် မျက်ကွယ် ပြုတာမျိုး လဲ မဟုတ်ပဲ ပညာသား ပါပါ ချစ်စဖွယ် တုံ့ပြန် တတ် တာမျိုးပါ။
သူ့ရဲ့ အလုပ်အ ကိုင် အပေါ် စိတ်နှစ် တတ်မှု လူ့ကျင့်ဝတ် ပြည့်ဝမှု ဆက်ဆံရေးတွေ မှာ ပညာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမှုတတ်ခြင်းတို့အပြင် သူ့ကို မုန်းနေ တိုက်ခိုက်နေတတ်တဲ့ သူတွေ ကို တောင်မှ သူပရိသတ်ဖြစ်လာတောင် အချိန်တိုနဲ့ စွဲဆောင်နိုင်မှုတို့က စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ရဲ့ အစွမ်းတွေထဲ အစွမ်း တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ” နာမည် ရင်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလိုင် ပါ ( ဟထိုး မပါပါဘူး အခွေ ထုတ် တော့ လျှာရှည်ပြီး ဟထိုး ထည့်လိုက်မိပါတယ် ) အခုက စပြီး ဟထိုးမပါတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလိုင်လို့ပဲ အမှန် အတိုင်း စာလုံးပေါင်းပါ တော့မယ် နာမည်ပြောင်က မလိုင် ပါ ( ခမ်းမလိုင် ခမ်းမလိုင်ဆိုပြီး မလိုင်ဖြစ်သွားတာပါ ) ”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့Real_Name_Challenge မှာ ပါဝင်ခဲ့ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ပရိသတ်တွေ လည်း စိုင်းစိုင်းရဲ့ နာမည် အရင်းနဲ့ နာမည်ပြောင်လေး ကို သိရလို့ ကျေနပ်နေ ကြမယ် ထင်ပါတယ် နော် ။ ဖတ်ရှုပေးကြ တဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော် ။ ” အချိန် အတော်ကြာ မှားယွင်း နေတဲ့ သူ့ရဲ့ နာမည် အရင်း ကို ပြောပြ လိုက် တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ” ပရိသတ်ကြီး ရေအနုပညာ လောကမှာ လျှောက်လှမ်း ကြတဲ့ သူတိုင်း ဝေဖန် မှု တိုက်ခိုက်မှု တွေကို အချိန်နဲ့ အမျှ ခံစားရ တာပဲဖြစ်ပါ တယ် ။
တချို့ ကလဲ ဒေါသအ လျောက် တုံ့ပြန် ကြသလို တချို့ ကလဲ မမြင်ချင် ယောင်ဆောင် မျက်ကွယ်ပြု တတ်ကြပါတယ် ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် တစ်ယောက် ကတော့ ဒေါသ အလျောက် တုံ့ပြန်တာ မျိုးလဲ မဟုတ် မျက်ကွယ် ပြုတာမျိုး လဲ မဟုတ်ပဲ ပညာသား ပါပါ ချစ်စဖွယ်တုံ့ပြန်တတ် တာမျိုးပါ ။ သူ့ရဲ့ အလုပ် အကိုင် အပေါ် စိတ်နှစ်တတ် မှု လူ့ကျင့် ဝတ်ပြည့် ဝမှု ဆက်ဆံရေး တွေမှာ ပညာရှင် ဆန်ဆန် ပြုမှု တတ်ခြင်းတို့ အပြင် သူ့ကို မုန်းနေ တိုက်ခိုက် နေတတ်တဲ့ သူတွေကို တောင်မှ သူပရိသတ် ဖြစ်လာတောင် အချိန်တို နဲ့ စွဲဆောင်နိုင် မှုတို့က စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ရဲ့ အစွမ်းတွေ ထဲ အစွမ်း တစ်ခု ပဲဖြစ်ပါ တယ် ။
ဒီနေ့မှာ လည်း ” နာမည်ရင်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလိုင် ပါ ( ဟထိုး မပါ ပါဘူး အခွေ ထုတ်တော့ လျှာရှည် ပြီး ဟထိုး ထည့် လိုက် မိပါတယ် ) အခု က စပြီး ဟထိုး မပါတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလိုင် လို့ပဲ အမှန် အတိုင်း စာလုံးပေါင်းပါ တော့မယ် နာမည် ပြောင်က မလိုင် ပါ ( ခမ်းမလိုင် ခမ်းမလိုင် ဆိုပြီး မလိုင် ဖြစ်သွားတာပါ ) ” ဆို တဲ့ စာလေးနဲ့ Real_Name_Challenge မှာ ပါဝင်ခဲ့ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ပရိသတ်တွေ လည်း စိုင်းစိုင်း ရဲ့ နာမည် အရင်း နဲ့ နာမည်ပြောင် လေးကို သိရ လို့ ကျေနပ် နေကြ မယ်ထင် ပါတယ် နော် … . ဖတ်ရှုပေး ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါ စေလို့ ဆုတောင်း ပေး လိုက် ပါတယ်နော် … .
Previous post အမြိုးသားထုကွီးရဲ့ နှလုံးအိမျကိုအမွဲကိုငျလှုပျတတျတဲ့ နနျးမှစေံရဲ့ ပုံစံတဈမြိုးနဲ့ အမိုကျစား Tik Tok ဗီဒီယိုလေး
Next post ခဈြစရာအမှုအရာလေးနဲ့ ဆကျဆီကကြ အမိုကျစား ကပွထားတဲ့ ဆောငျးယှနျးစံရဲ့ အလနျးစား ဗီဒီယိုလေး